Matio 7: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-04 mpandimby ny Magazine > Matio 7: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra
Ao amin'ny Matio 5, i Jesosy dia manazava fa ny fahamarinana marina dia avy ao anaty ary resaka am-po, fa tsy fihetsika fotsiny. Ao amin'ny toko faha-6 dia vakintsika izay nolazain'i Jesosy momba ny asa soa nataontsika. Tokony ho tso-po ianao ary tsy tokony haseho ho tombony hahasoa antsika. Ao amin'ireo toko roa, i Jesosy dia niresaka olana roa nipoitra, satria ny tsirairay no mamaritra ny fahamarinana momba ny fitondran-tena ivelany. Amin'ny lafiny iray, Andriamanitra tsy te hiova ny fitondran-tenantsika ivelany, ary amin'ny lafiny iray, dia mitarika ny olona hieritreritra izy ireo fa miova ny fony. Ao amin'ny Toko faha-7 dia asehon'i Jesosy amintsika ny olana fahatelo izay mipoitra rehefa lehibe ny fihetsika: ny olona manao ny rariny miaraka amin'ny fitondran-tena dia mitaky hitsara na manakiana ny hafa.
Ny splinter amin'ny mason'ny iray hafa
“Aza mitsara fa tsy hotsaraina ianareo”, hoy i Jesosy, “fa araka ny lalàna izay tsarainareo no hitsarana anareo; ary araka ny famarana ataonareo no hanoharana ho anareo koa» (Mat 7,1-2). Fantatry ny mpihaino an’i Jesosy hoe inona no fitsarana noresahin’i Jesosy. Izany dia natao hanoherana ny toe-tsaina mitsara ny olona izay efa nanakiana an'i Jesosy - amin'ireo mpihatsaravelatsihy izay mifantoka amin'ny fitondran-tena ivelany (jereo ny Jaona 7,49 ohatra amin'izany). Izay haingana mitsara ny hafa sy mahatsapa ho ambony noho ny hafa dia tsarain’Andriamanitra. Samy efa nanota avokoa ary samy mila famindram-po. Sarotra amin’ny sasany anefa ny manaiky izany, ary sarotra aminy ny mangoraka ny hafa. Noho izany, dia nampitandrina antsika i Jesosy fa ny fomba itondrantsika ny hafa dia mety hitarika antsika ho amin’izany koa. Arakaraka ny ahatsapantsika fa mila famindram-po isika, no tsy hitsara ny hafa.
Avy eo i Jesosy dia nanome antsika fanoharana feno hatsikana momba ny tiany holazaina: “Fa inona no hitanao ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao, ka tsy raisinao ny andry eo amin’ny masonao?” (Matio 7,3). Amin'ny teny hafa, ahoana no ahafahanao mitaraina momba ny fahotan'ny olona iray rehefa nanao fahotana lehibe kokoa ianao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe: Aoka izay, fa ta-hanaisotra ny sombin-kazo eo amin'ny masonao aho, ka indro, misy andry eo amin'ny masonao. Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin'ny masonareo; dia jereo ny fanalanao ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao » (and. 4-5). Azo inoana fa nihomehy mafy ny mpihaino an’i Jesosy tamin’io sarin’ny mpihatsaravelatsihy io.
Ny mpihatsaravelatsihy iray dia milaza fa hanampy ny hafa hamantatra ny fahotany. Nambarany fa hendry izy ary nilaza ho mazoto manoloana ny lalàna. Nilaza anefa i Jesosy fa tsy olona afaka manampy ny olona toy izany. Mpihatsaravelatsihy izy, mpisehatra, mpanao mody. Tsy maintsy esoriny aloha ny fahotana amin'ny fiainany; Tokony ho takany ny halehiben'ny fahotany. Ahoana no ahafahana manala ny bara? Tsy nohazavain'i Jesosy fa eto, fa fantatsika avy amin'ny toerana hafa fa ny fahasoavana dia esorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany. Ireo izay niaina famindram-po ihany no tena afaka manampy ny hafa.
“Aza omenareo amboa izay masina, ary aza atsipy eo anoloan’ny kisoa ny voahanginareo” (and 6). Ity fehezanteny ity dia matetika adika hoe tokony hotoriana amim-pahendrena ny filazantsara. Mety ho marina izany, saingy tsy misy ifandraisany amin’ny filazantsara ny teny manodidina eto. Raha ampifandraisina amin’ny teny manodidina anefa io ohabolana io, dia mety hisy maneso ny hevitry ny hoe: “Ry mpihatsaravelatsihy, tehirizo ho anao ny voahangin’ny fahendrenao, ary raha heverinao fa mpanota ilay olon-kafa, dia aza mandany ny teninao aminy. , satria izy dia tsy hankasitraka anao noho izay lazainao ary ho tezitra amin'ny tenanao fotsiny. " Izany dia ho fehin-kevitra mahatsikaiky ho an’ny tenin’i Jesosy fototra manao hoe: “Aza mitsara”.
Fanomezan-tsoa avy amin'Andriamanitra
Efa niresaka momba ny vavaka sy ny tsy fahampian’ny finoantsika i Jesosy (Toko 6). Izao indray no nolazainy: “Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava dia hahita ianareo; dondony dia hovohana ianareo. Fa izay mangataka no mahazo; ary izay mitady any dia hahita; ary izay mandondòna ao no hovohana » (V 7-9). Jesosy dia milazalaza ny toe-tsaina matoky na matoky an’Andriamanitra. Nahoana isika no afaka manana finoana toy izany? Satria azo itokisana Andriamanitra.
Avy eo i Jesosy dia nanao fampitahana tsotra: “Iza aminareo no mangataka mofo ka manome vato ny zanany? Ary raha angatahany hazandrano, dia omeo bibilava? Raha ianareo, izay ratsy fanahy, dia mbola afaka manome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo Izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an’izay mangataka aminy! (and. 9-11). Na dia ny mpanota aza no mikarakara ny zanany, dia afaka matoky an’Andriamanitra tokoa isika fa hikarakara antsika zanany koa, satria lavorary Izy. Hanome antsika izay rehetra ilaintsika Izy. Tsy mahazo izay tadiavintsika foana isika ary indraindray tsy ampy fifehezana. Tsy miditra amin'ireo zavatra ireo i Jesosy ankehitriny - ny ahiahiny eto dia ny hoe afaka matoky an'Andriamanitra isika.
Manaraka izany, dia niresaka momba ny fitsipika volamena i Jesosy. Ny dikany dia mitovy amin'ny an'ny andininy 2. Toy ny hitondrantsika ny hafa no hitondran’Andriamanitra antsika, ka hoy izy: “Ary na inona na inona tianareo hataon’ny olona aminareo, dia ataovy aminy koa izany!” (V 12). Koa satria Andriamanitra manome antsika zava-tsoa, ​​dia tokony hanao soa amin’ny hafa isika. Raha tiantsika ny ho tsara fanahy ary raha tiantsika ny hotsaraina amin’ny alalan’ny fisalasalana, dia tokony ho tsara fanahy amin’ny hafa isika. Raha tiantsika hisy olona hanampy antsika rehefa mila fanampiana isika, dia tokony ho vonona hanampy ny hafa koa rehefa mila fanampiana izy ireo.
Momba ny fitsipika volamena dia hoy i Jesosy: “Izao no lalàna sy ny mpaminany” (and. 12). Io fitsipiky ny saina io no tena resahin'ny Torah. Ireo sorona be dia be rehetra dia tokony hampiseho amintsika fa mila famindram-po isika. Ny lalàna sivily rehetra dia tokony hampianatra antsika hitondra tena tsara amin'ny mpiara-belona amintsika. Ny fitsipika volamena dia manome antsika hevitra mazava momba ny fomba fiainan’Andriamanitra. Mora ny mitanisa, fa sarotra ny mihetsika. Noho izany dia namarana ny toriteniny tamin’ny fampitandremana vitsivitsy i Jesosy.
Ny vavahady tery
“Midira amin’ny vavahady ety”, hoy ny torohevitr’i Jesosy. “Fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin’ny fahamelohana, ka maro ny miditra any. Endrey tery ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy!” (V 13-14).
Ny lalan'ny fanoherana faran'izay kely dia mitarika ho amin'ny loza. Ny fanarahana an'i Kristy no fomba fatra malaza indrindra. Ny fandehanana dia midika hoe mandà ny tenanao, mieritreritra mahaleo tena, ary vonona ny hiroso amin'ny finoana ihany na dia tsy misy olon-kafa aza. Tsy afaka hiaraka amin'ny ankamaroantsika isika. Tsy azontsika atao ihany koa ny mahita olona vitsy an'isa mahomby satria kely izany. Ny lazany na ny tsy fahita firy dia tsy refesin'ny fahamarinana.
“Tandremo ny amin’ny mpaminany sandoka”, hoy ny fampitandreman’i Jesosy. “... izay mankao aminareo amin’ny fitafian’ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia masiaka izy” (and.15). Ny mpitory sandoka ety ivelany dia manao zavatra tsara, fa ny antony manosika azy ireo dia fitiavan-tena. Ahoana no ahafantarantsika raha diso izy ireo?
"Tokony hahafantatra azy amin'ny voany ianao." Mety maharitra fotoana io, fa amin'ny farany ho hitantsika raha miezaka manararaotra izany ilay mpitory na raha tena manompo ny hafa aza izy. Ny fisehoana dia mety ho mamitaka mandritra ny fotoana kelikely. Ireo mpiasa ny ota manandrana toa ny anjelin'Andriamanitra. Na ny mpaminany sandoka aza dia mijery tsara eo amin'ny fotoana fohy.
Misy fomba haingana kokoa ahafantarana ve? Eny, misy - Jesosy dia hiditra ao aoriana kely. Nampitandrina ireo mpaminany sandoka anefa aloha izy hoe: “Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo” (and. 19).
Miorena amin'ny vatolampy
Miafara amin’ny fanamby ny Toriteny teo An-tendrombohitra. Rehefa avy nandre an’i Jesosy ny olona, ​​dia tsy maintsy nanapa-kevitra raha hankatò. "Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra" (and 21). Nilaza i Jesosy fa tsy maintsy miantso azy hoe Tompo ny olona rehetra. Tsy ampy anefa ny teny fotsiny.
Na ny fahagagana natao tamin'ny anaran'i Jesosy aza dia tsy ampy: «Betsaka no hilaza amiko hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka fanahy ratsy amin'ny anaranao va izahay? Moa ve tsy efa nanao fahagagana maro tamin'ny anaranao izahay?
Dia hibaboka aminy aho hoe: Tsy fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, ianareo mpanao ratsy! (and. 22-23). Asehon’i Jesosy eto fa hitsara ny olombelona rehetra Izy. Hamaly azy ny vahoaka ary holazaina hoe hisy hoavy ho azy ireo miaraka amin’i Jesosy na tsy misy.
Iza no azo hovonjena? Vakio ny fanoharana ny amin'ilay mpamorona trano malina sy adala: "Na iza na iza mandre ny teniko ka manao izany ..." dia nametraka ny teniny tamin'ny haavon-drainy ny teniny. Tsy maintsy mankatoa an'i Jesosy ny olona rehetra rehefa mankatò an'Andriamanitra. Ny olona dia tsaraina araka ny fihetsik'izy ireo amin'i Jesosy. Samy tsy mahomby isika ary mila famindram-po, ary io famindram-po io dia hita ao amin'i Jesosy.
Izay manorina eo amin’i Jesosy dia “tahaka ny lehilahy hendry izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy. Ary rehefa latsaka ny oram-be, ka tonga ny rano, ary nifofofofo ny rivotra ka namely ny trano, dia tsy tonga saina aho; fa naorina teo ambonin’ny vatolampy » (V 24-25). Tsy mila miandry ny tafio-drivotra isika vao mahita izay ho tohiny. Na iza na iza manorina amin'ny tany ambany dia hiharan'ny fahasimbana lehibe. Izay rehetra miezaka mametraka ny fiainany ara-panahy amin’ny zavatra hafa ankoatra an’i Jesosy dia manorina eo ambonin’ny fasika.
“Ary rehefa vitan’i Jesosy izany teny izany”, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany; fa nampianatra azy tamin’ny fahefana Izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna azy” (and. 28-29). Niteny tamin’ny anaran’i Jehovah i Mosesy, ary niteny tamin’ny anaran’i Mosesy koa ny mpanora-dalàna. Fa i Jesosy no Tompo ary niteny tamin’ny fahefany. Nambarany fa nampianatra ny fahamarinana tanteraka, ho mpitsara ny olombelona rehetra ary fanalahidin’ny mandrakizay.
Jesosy dia tsy toy ny mpampianatra lalàna. Tsy feno ny lalàna ary tsy ampy ny fitondrantena irery. Mila ny tenin'i Jesosy isika ary manao ny fangatahana tsy misy afaka manatanteraka azy irery. Mila famindram-po isika, miaraka amin'i Jesosy dia afaka matoky ny handray azy. Ny fiainantsika mandrakizay dia miankina amin'ny fomba handraisantsika an'i Jesosy.